King Zero: လူမှူ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့်အတွေးအခေါ်မြင့်မားရေးသင်တန်း
ဗီဇဟုဆိုလိုက်သည်နှင့်လူတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်တတ်ကြပါသည်။ဗီဇနှင့်ပတ်သက်လို့တိကျသော ဖြေဆိုချက်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမူကျနော်အပါအ၀င် အချို့သောလူတော်တော်များများမှာ ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်မိဘမျိုးရိုးတို့၏အလေ့အထ၊စိတ်သဘောထား၊အမူအကျင့်၊ပြောဆိုပုံကအစအရာရာနှင့်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ဗီဇသည်သက်ရှိတိုင်း၏ ဖြစ်တည်တိုးတတ်မူတွင် အဓိကကျလျှက်ရှိသည်မှာ အသေချာပင်ဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ်ရာသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မူလ ဗီဇအရဖြစ်စေ မကောင်းမူကျူးလွန်သူများ အကြောင်းကိုပြောဆိုဆွေးနွေးရာသို့် ရောက်ရှိခဲ့ပါက ကြက်မှာအရိုးလူမှာအမျိုး ဟူသောစကားကိုအခြေခံ၍ မျိုးရိုးဗီဇသည် လူတိုင်းအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည် ဟု နားလည်နားလည်သဘောပေါက်မိပါသည်။ ဗီဇနှင့်ပတ်သက်၍ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကပင် အစပြုရမည်ဖြစ်သည်။
မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းသည် မိမိတို့ရင်သွေးငယ်များကို အတော်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်သည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း မိမိတို့ သား၊သမီးငယ်များကို မိမိတို့လိုသလိုပုံသွင်းပြုပြင်ကြသည်။ ကလေးများသည် ဖယောင်းရုပ်နှင့် ပုံစံတူသည်။ မိမိတို့လိုသလိုပုံသွင်းယူရသည်ဟူသော စကားကိုမှတ်သားဖူးပါသည်။ မိဘသည် သား သမီး၏ လက်ဦးဆရာဖြစ်သည်။ ဆရာကိုယ်တိုင် ဥာဏ်ပညာဗဟုသုတ ပြည့်စုံပါမှ တပည့်ကောင်းများမွေးထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်သလို မိဘ အရည်ချင်းရှိမှ သားကောင်း သမီးကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။မူလအားဖြင့် ကလေးငယ်များ၏ ပင်ကို ဗီဇ စိတ်နှလုံးတို့သည် ဖြူစင်မူကို အရင်းတည်ပြီးဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။
လူကြီးမိဘတို့၏အပြုအမု၊အပြောအဆို၊ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်သည်သာကလေးငယ်များ၏ဗီဇ၊စိတ်နှလုံးတို့သည်ဖြုစင်မှုူကိုအရင်းတည်၍ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။ လူကြီးမိဘတို့၏ အပြုမူ ၊ အပြောအဆို ၊ ဆောင်ရွက်ပုံ အဆင့်ဆင့်သည်သာ ကလေးငယ်များကို ပုံဖော်လျှက်ရှိသည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သားသမီးများ၏ဗီဇ သည် မိဘ၏ ဗီဇ ဇစ်မြစ်ကို အခြေခံပြီး ကောင်းသောဗီဇ (သို့) ဆိုးသော ဗီဇ များဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ လူကြီးမိဘများသည် သားသမီး၊မြေး၊မြစ် တို့ကိုသာစိတ်တိုင်းကြပြုပြင်လိုကြသော်လည်း မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် မေ့လျော့နေကြဟန်ရှိပေသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်သည်လည်း ကလေးငယ်များ၏ ဗီဇကို အကောင်းအဆိုးဖြစ်ပေါ်စေရန် အထောက်ကူပြုသော အရာများတွင်အရေးကြီးသောအချက်လက်ဖြစ်သည်။မိဘအစဉ်အဆက်နှင့်မူလဗီဇကောင်းသူများပင် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် လမ်းမှားရောက်သူများပင် အများအပြားပင်ရှိခဲ့သည်။ မူလဗီဇ ကောင်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွင် နေထိုင်ကြီးပြင်းသူများအဖို့ အထူးပြောစရာမလိုပေမယ့် မူလဗီဇ အခြေခံအားနည်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်လည်း မကောင်းပါက အကျိုးဆက်သည် အချိုးစားညီမျှစွာ ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပင်မဆိုးချင်ပဲဆိုးခဲ့ရသူများ၊ဘ၀ကိုဖြစ်သလိုရေစုန်မျှောသူများ အများပင်ရှိ ခဲ့ပြီး နောက်နောင်လဲ မလွဲမသွေရှိနေအုံးမည်သာဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် အရာရာကို တွေးခေါ် ၊ စဉ်းစား ၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်သူ အများအကျိုးသယ်ပိုးလိုသူ ဖြစ်လာသည်မှာ ရှိသော်လည်း နည်းပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျနော်တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကင်းကွာ၍ မရဘဲ မလွဲမသွေ ကူးလူးဆက်ဆံရမည် ဖြစ်သည်။ မိမိနေထိုင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို မိမိသုံးသပ်ရွေးချယ်သင့်ပေသည် ။ လူသည် မိမိကိုယ်ကို ကိုးကွယ်ရာ ဟူသောစကားနှင့် အညီ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးချင်း အလိုက် အနည်းမျှစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ရုံဖြင့် လူမူပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတတ်ပြောင်းလဲစေမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးချင်းအလိုက် လူနေမူအဆင့်အတန်း စည်းစနစ်ကျမူ စည်းကမ်းသေ၀ပ်မူ စသည့် အခြေခံအနည်းငယ် မျှကို ပြုပြင်လိုက်ရုံဖြင့် မိမိ မိသားစု မိမိပတ်ဝန်းကျင် ထိုမှ မိမိလူမျိုး၊မိမိနိုင်ငံအကျိုးပြုလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည့်မိပါသည်။ မိမိကြောင့်အခြားသူများကို မထိခိုက်ရဟူသော စိတ်ဓာတ်ရှိလျှင်ပင် ပတ်ဝန်ကျင်ကောင်း ဖြစ်လာစေရန် အထောက်ကူပြုမည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ လူသားများသည် အကောင်းအဆိုး နှစ်မျိုးစလုံးကို ဖန်တီစွမ်းဆောင်နိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ မိမိ၏ စိတ်ဓာတ် စည်းကမ်း ကိုမြှင့်တင့်ပြီး စည်းစနစ်ကျစွာနေထိုင်ခြင်းဖြင့် မိမိ မိသားစုမှ အစပြု၍ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှသာ မိမိ၏ (generation) မျိုးဆက်သည် မိမိ ကဲ့သို့ အရည်းအချင်းရှိသော မျိုးဆက်ဖြစ်လာပြီး မိမိလိုသလို ပုံသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပန်းပုရုပ်၏ ဟန်ပန်အမူအရာ အသက်ဝင်မူသည် ပန်းပုဆရာ၏ လက်တွင်သာရှိပါကြောင်းရေးသားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။
ဝင်းထွန်း (ခ) ဝင်းမင်းထွန်း
( yamakim factory -co,lld.)
Posted by dhamma at 1:52 AM
သိပ္ပံဆရာတွေ မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ မေတ္တာ
ဟာသ ၊ အတူတူရယ်ကြရအောင်
သေဒဏ်ကျ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးကို လွှတ်ပေးရန် သံဃာ...
ဘိုးဘိုးအောင် ကိုယ်မဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်ရတယ
မိတ်ဆွေတု ၊ မိတ်ဆွေယောင်များ အတွက်.
ွှ့The Best Friend Library